Rwanda mechiri ókèala n'ihi egwu Ebola
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Rwanda mechiri ókèala n'ihi egwu Ebola
Na-agbasa News Travel • Akụkọ kacha ọhụrụ na DR Congo • News • Akụkọ na -agbasa na Rwanda • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Oria Ebola na Democratic Republic of Congo ka bu ezigbo ihe egwu. Rwanda na-emeghachi omume ugbu a ma mechie ókèala agbata obi ya mgbe ọ dịkarịa ala mmadụ abụọ nwụrụ na nje ahụ na-egbu egbu mgbe ha gafere ókè ahụ.
Ihe ntiwapụ ahụ bụ ihe kachasị dị mgbagwoju anya dịka ọ na-eme na mpaghara ọgba aghara na-arụ ọrụ.
Na nkwupụta, ndị isi ala Congo kwuru na "enweela mkpebi otu ndị ọchịchị Rwandan" imechi ịgafe na Goma.
Ndi WHO adọburu aka na ntị megide ịnwa igbochi nje site na igbochi njem ma ọ bụ azụmaahịa.